सोम शर्माको सातु - Naya Patrika
सोम शर्माको सातु
छाया नेपाली भावुकतामा बगेर आफ्नो पूरै महाभारत सुनाउन थालेकी थिई । इन्स्पेक्टर खड्कालाई उसको प्रेमकथा वा भ्रमर भावुकसँग कसरी उसको घनिष्टता भयो भन्ने कुरामा त्यति खास चासो थिएन । उसले छायालाई आफ्नो कुरा छोटकरीमा भन्न आदेश दियो । छायाले बेलिविस्तार लगाएपछि उसले संक्षेपमा आफ्नो नोटबुकमा टिपेअनुसार नेपालगन्जको भेट उनीहरूको प्रेम हुँदै विवाहमा परिणत भयो । छाया जनकसँग काठमाडाैं आई । एक दिन कुरै कुरामा उसले भ्रमरलाई फेरि भनी, ‘मलाई मेरो नाम मन पर्दैन । छाया । मलाई यो नाम नकारात्मक लाग्छ ।’
त्यस दिन भ्रमरले उसको नयाँ नाम राखिदियो, कामिनी । कामिनी उसले लेखिरहेको एउटा नयाँ कविताको शीर्षक थियो । सुरुका केही महिना एकदमै रमाइलोसँग बिते । कामिनीलाई लाग्थ्यो, जिन्दगी भ्रमर भावुकका कविताहरूसँगै बित्नेछ । तर, प्रेमान्ध उसलाई थाहा नभएको कुरो के थियो भने, कविताले पेटको भोक मेटिँदैन । कविताले मात्र जीवनका व्यावहारिक आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । बिस्तारैबिस्तारै जिन्दगीका थपेडाहरूले उनीहरूको भावुकताको महलको जग हल्लाउन थाल्यो । उसको साधारण जागिरको भरमा जेनतेन गृहस्थीको गुजारा हुन्थ्यो । त्यो पनि धेरै कुराहरूमा सम्झौता गरेर । तैपनि उसले कुनै गुनासो गरेकी थिइन । त्यो उसैले रोजेको केटो थियो । समस्या त त्यस दिन सामुन्ने आयो जुन दिन छायालाई थाहा भयो…
भ्रमर भावुक त्यस दिन पनि एउटा कविता सम्मेलनमा गएको थियो । सम्मेलनपछि सुरापानको पनि कार्यक्रम रहेछ । त्यो कुरा कामिनीलाई थाहा थिएन । ऊ एउटा गम्भीर विषयमा भ्रमरसँग छलफल गर्न कुरिरहेकी थिई । रातको निकै प्रहर बितेपछि मात्र भ्रमर घर आइपुग्यो । दुईजना अरू साहित्यकारहरूको काँधमा सहारा लिएर । उसले भुइँमा खुट्टा नै नटेकिने गरी रक्सी पिएको रहेछ ।
कामिनीको लागि यो कुरा नौलो थिएन । अक्सर यस्ता कार्यक्रममा गएर भ्रमर मातेर आउँथ्यो । त्यो कुरामा उनीहरूको ठाकठुक परिसकेको थियो । तर, त्यस दिन कामिनीलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो । किनभने उनीहरू दुईजनाको जीवनको एउटा महत्वपूर्ण कुराको फैसला गर्नुपर्ने दिन थियो ।
पु¥याउन आउने साथीहरू अप्ठ्यारो मान्दै उससँग बिदा भएर गएपछि उसले भ्रमरलाई खाटमा लगेर सुताइदिई । भ्रमर अर्धबेहोसीमा बर्बराउन थाल्यो । आफ्ना कविताहरू टुक्राटाक्री सुनाउन थाल्यो । कतिपय सायद उसले नलेखेका र मनमा मात्र भएका पनि थिए । अनि केही बेरमा उसको मनभित्रका भडास निस्कन थाले । आफ्ना हरेक कविता संग्रह विश्वस्तरका भएको दाबी गर्दै उसले आफूलाई देवकोटा, भूपि र सेक्सपियरभन्दा कम नभएको दाबी गर्न थाल्यो ।
‘यो देशमा प्रतिभाको कदर छैन । चाकरी, चाप्लुसी र पहुँच नपुगेकाले मैले कुनै पुरस्कार पाइनँ । नत्र मेरा हरेक कृतिले मदन पुरस्कार पाउनुपथ्र्यो, बुझ्यौ ? अबको चालीस वर्षपछि मात्र यिनीहरूले मेरा कविताको महत्व बुझ्नेछन् । तर, त्यति वेलासम्म सायद भ्रमर भावुक यो संसारमा हुँदैन । मलाई जब खोज्छन् यिनीहरूले, म माथि कतै बसेर खुच्चिङ भनिरहेको हुनेछु ।’
कामिनी नरमाइलो मानेर उसलाई हेरिरही । उसलाई आफू एक्लो भएकोजस्तो लाग्यो । निकै बेर बर्बराएर भ्रमर निदायो, घुर्न थाल्यो । कामिनी रातभर निदाउन सकिन । भोलिपल्ट पनि भ्रमर निकै ढिला ब्युँझियो । उसको टाउको रोटेपिङ जसरी घुमिरहेको थियो । कामिनीले उसलाई कागतीपानी बनाएर खान दिई । त्यो खाएर भ्रमर फेरि सुत्यो । कामिनी अफिस जाने वेलासम्म पनि ऊ सुति नै रहेको थियो । दिनभर कामिनीलाई अफिसमा काममा पनि मन लागेन । उसले आधा दिनको बिदा मागी र निस्की । तर, कहाँ जाने वा के गर्ने भन्ने उसलाई थाहा थिएन । डेरा फर्कन पनि मन थिएन ।
उसको मनभित्र उठिरहेको बबन्डरले उसलाई सुकेको पतिंगरसरह उडाइरह्यो । असन, इन्द्रचोक, भोटाहिटी, रत्नपार्क र दरबारमार्गतिर ऊ विनाउद्देश्य भौँतारिइरही । साँझ झमक्क परिसकेपछि जाने अरू कुनै ठाउँ नभएर ऊ डेरा फर्किई । भ्रमर कतै नगएर कोठामै बसिरहेको रहेछ । भ्रमरले उसलाई सोध्यो, ‘किन आज यति ढिला गरेकी ? मलाई पिर परिसकेको थियो । कतिपटक फोन गरेँ, त्यो पनि उठाइनौ ।’ उसले फोन ब्यागबाट निकालेर हेरी । नभन्दै भ्रमरको थुप्रै मिस्ड कलहरू रहेछन् । उसले गम्भीर भएर भनी, ‘खै, मैले त सुन्दै सुनिनछु घन्टी ।’
भ्रमरले चिन्तित भावले सोध्यो, ‘तिमीलाई के भएको छ ? अनुहार पनि मलीन देख्छु ।’
उसले व्यंग्यात्मक स्वरमा भनी, ‘त्यसले तपाईंलाई के फरक पर्छ र ?’
भ्रमर उसको नजिक आयो र भन्यो, ‘किन यस्तो कुरा गरिरहेकी ? हिजोको कुरामा अझै रिसाइरहेकी हौ भने मलाई माफ गर । आइन्दा म त्यसरी रक्सी खान्नँ ।’
केही बेर भ्रमरलाई क्वारक्वार्ती हेरेर कामिनीले भनी, ‘म डाक्टरकहाँ गएकी थिएँ । हिजो मेरो युरिन टेस्टको रिजल्ट पनि आयो ।’
भ्रमरले चिन्तित भावमा सोध्यो, ‘डाक्टर ? युरिन टेस्ट ? किन ?’
‘महिनाबारी रोकिएको दुई महिना भएको थियो ।’
भ्रमरले उदेकपूर्ण स्वरमा भन्यो, ‘साँच्चै ? मलाई किन नभनेकी त ? के भन्छ डाक्टरले ?’
कामिनीले गम्भीर भएर भनी, ‘रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।’
भ्रमरको अनुहारमा प्रसन्नताको भाव धपक्कै बल्यो । उसले केही भन्नुअघि नै कामिनी नै बोली, ‘यही विषयमा कुरा गर्न म तपाईंलाई कुरिरहेकी थिएँ हिजो । तर …’
भ्रमरले उसलाई अँगालोको घेरामा बाँधेर आफ्नो नजिक तान्दै भन्यो, ‘मलाई माफ गर कामिनी । तिमी मलाई यति ठूलो खुसीको खबर सुनाउन कुरिरहेकी थियौ र म भने…’
उसको कुरा काट्दै कामिनीले भनी, ‘के यो साँच्चै खुसीको कुरा हो त ?’
अलमल्ल परेको भावमा भ्रमरले भन्यो, ‘यो के भन्दै छ्यौ तिमी ? योभन्दा बढी खुसीको कुरा अरू के हुन सक्छ हाम्रा लागि अहिले ?’
कामिनीले अनिश्चित भावले भनी, ‘मलाई थाहा छैन ।’
भ्रमर अझै जिल्ल प¥यो । कामिनी उसको अँगालोबाट फुत्केर खाटमा थ्याच्च बसी । टोलाएर भित्तातिर हेर्दै उसले भनी, ‘मेरो तलबको भरमा हामी दुईजनालाई बाँच्न धौधौ भइरहेको छ । तपाईंको लेखन आकासे खेतीजस्तो छ । यस्तो अवस्थामा के हामी आफ्नो सन्तान जन्माउने, पाल्ने, पढाउने, लेखाउने र उसलाई कुनै भविष्य दिने कल्पना गर्न सक्छौँ ?’
भ्रमरले ट्वाल्ल परेर उसलाई हेरिरह्यो । यो तीतो वास्तविकताबाट ऊ जति निरपेक्ष रहन खोजे पनि कामिनीको प्रश्नले उसलाई भित्रैसम्म हल्लाइदिएको थियो । आफ्नो आर्थिक हैसियत उदांगो भएर उसका सामु उभिएको थियो । उभिएको मात्र होइन, उसलाई हेरेर व्यंग्यात्मक पाराले हाँसिरहेको थियो, हियाइरहेको थियो । भ्रमरले भन्यो, ‘सधैँ यस्तो हुँदैन । मलाई विश्वास छ, हाम्रो दिन पनि फिर्छ । भगवान्ले कुनै न कुनै बाटो खोल्नेछन् हाम्रा लागि पनि ।’
कामिनी तीखो स्वरमा कराई, ‘जिन्दगी तपाईंको कविताजस्तो होइन । गम्भीर हुन सिक्नुस् । हावादारी कुराको भरमा हामी सन्तान जन्माउने योजना बनाउन सक्दैनौँ ।’ त्यस दिन उनीहरू दुईजनाबीच पहिलोपटक झगडा प-यो । भ्रमरले कामिनीलाई आफूले पहिले नै यी सब कुरा भनेको हुनाले अहिले आएर उसलाई मात्र दोष लगाएर केही हुन्न भन्ने तर्क ग-यो । कामिनीले त्यतिवेला आफ्नो मतिभ्रष्ट भएको हुनाले यी सबै कुरा देख्न नसकेको ओठे जवाफ फर्काइदिई । वादविवादको कुनै समाधान निस्कने छाँटै भएन । आफ्नो कपाल भुत्ल्याउँदै भ्रमर करायो, ‘अब तिमी आफैँ भन म के गरौँ ? बैंक लुट्न जाऊँ ? मूर्ति उखेल्न जाऊँ ? के गरौँ म ?’
हराएको मानिस १९
कामिनीले भनी, ‘तपाईंले गरेर गरिन्न त्यो पनि । मेरो नियतिमा जे लेखेको छ, त्यसबाट सायद म भाग्न सक्दिनँ । तर, अहिलेका लागि एउटा कुरामा चाहिँ कुनै विवाद छैन ।’
कामिनीले दुःखी तर दृढ स्वरमा भनी,
‘हामी यो बच्चा जन्माउन सक्दैनौँ ।’
त्यो कुरामा फेरि उनीहरू विवाद गर्न थाले । भ्रमर भन्थ्यो, परेपछि सब आफँै गर्न सक्छि मानिसले । जिम्मेवारी थपिएपछि त्यसलाई वहन गर्ने बाटो नपहिल्याई सुखै छैन । तर, कामिनी भन्थी, पानीमा हाम्फालेपछि पौडी खेल्न नसिकी सुखै छैन भनेजस्तो तर्कले जिन्दगी चल्दैन । पौडी खेल्न सिक्नेभन्दा बढी डुब्ने सम्भावना हुन्छ ।
‘म यस्तो रिस्क लिन सक्दिनँ । म कवि हैन । दिमागलाई थन्क्याएर मनको लहडमा केही गर्न सक्दिनँ । मैले जीवनमा जेजस्ता अभाव भोगेकी छु, मेरो सन्तानले पनि त्यही सब भोग्न परोस् भन्ने म चाहन्नँ ।’
जति विवाद गरे पनि एकआर्कालाई आश्वस्त बनाउन दुवैले सकेका थिएनन् । उनीहरू झगडा गरेरै एकअर्कातिर ढाड फर्काएर सुते । रातभरि दुवै निदाउन सकेनन् । भोलिपल्ट बिहान पनि उनीहरू केही बोलेनन् ।
कामिनी केही नखाई अफिस गई । उसको कोही थिएन । अफिसमै आफूभन्दा अलि पाको उमेरकी एक महिला सुमति शाक्यसँग उसको अलिअलि हिमचिम थियो । कामिनीले मनको बह उसैसँग पोखी र आफूले गर्न खोजेको कुरा बताई । उसले सुमतिसँग सहयोग मागी । सुमतिले उसलाई एकपटक राम्ररी सोच्ने सल्लाह दिई । त्यस साँझ ऊ डेरामा पुग्दा भ्रमर कोठामा थिएन । राति अबेर आयो, मातेर आयो । मातेको सुरमा उसले कामिनीलाई भन्यो, ‘चिन्ता नगर । चाँडै मेरा कविता अंग्रेजीमा अनुवाद हुन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेपछि तिनले धमाका मच्चाउँछन् । अरू आठ–दश भाषामा ती छापिन्छन् । विश्वका चर्चित पुरस्कार पाउँछन् । अनि म पनि मार्खेजजस्तै आधा घन्टा अन्तर्वार्ता दिएको पचासौँ हजार डलर चार्ज गर्न थाल्छु । हाम्रो सन्तानलाई भनेकोजस्तो भविष्य दिन सक्छौँ ।’
कामिनी सोम शर्माको सातुको कथा सुनिरही । आँखाबाट आँसु बगिरहे । उसको निश्चय झन्–झन् दृढ हुँदै गयो । भोलिपल्ट पनि भ्रमर उठ्नुअघि नै ऊ निस्केर हिँडी । उसलाई जहाँ जानु थियो, सुमति शाक्य उसको साथी, गइदिई । त्यस साँझ घर फर्किंदा आफूले सही वा गलत के गरेँ भन्ने उसलाई थाहा थिएन । भ्रमर कोठामै थियो । उसले भ्रमरलाई च्याप्प समाती । अचानक उसको मनको सारा बह बाँध भत्केको नदीको पानी जसरी बग्न थाल्यो । रुँदै उसले भनी, ‘मैले कोपिला लाग्नुअघि नै उम्रन आँटेको बोटलाई उखेलेर मिल्काइदिएँ ।’
केही बेर भ्रमर पत्थरजसरी जडवत् भयो । बिस्तारै कामिनीलाई आफूबाट अलग गरेर ऊ केही नबोली कोठाबाट निस्केर गयो । आफ्नो कथा सुनिरहेको इन्स्पेक्टर खड्कालाई हेर्दै कामिनीले आँसु पुछी र भनी, ‘त्यस दिन निस्केर गएको उहाँ फेरि फर्केर आउनुभएन । निकै दिन भएपछि मैले पत्रिकामा विज्ञापन छपाएकी हुँ । उहाँको यो अवस्था कसरी भयो र किन भयो मलाई थाहा छैन । अरूले किन उहाँमाथि आफ्नो नक्कली नाताको दाबी गरिरहेका छन् भन्ने पनि मलाई थाहा छैन ।’ इन्स्पेक्टर खड्का गम्भीर थियो । केस झनै जटिल बन्दै थियो । अब अझै दुईजनाको कुरा सुन्नै बाँकी थियो ।
#बज्रेश #सोम शर्माको सातु